Madaxda ammaanka Mareykanka oo ka digay khatar sare oo argagixiso gudaha ah, taas oo laga filan karo dadka aan ku faraxsaneyn natiijada doorashadii Biden | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxda ammaanka Mareykanka oo ka digay khatar sare oo argagixiso gudaha ah,...
Madaxda ammaanka Mareykanka oo ka digay khatar sare oo argagixiso gudaha ah, taas oo laga filan karo dadka aan ku faraxsaneyn natiijada doorashadii Biden
Madaxda ammaanka dalka Mareykanka ayaa ka digay khatar sare oo argagixiso gudaha ah, taas oo laga filan karo dadka aan ku faraxsaneyn natiijada doorashadii November.
Waaxda Ammaanka Gudaha ayaa sheegay in weerarkii ay taageerayaasha Trump 6-dii January ku qaadeen US Capitol uu sababi karo inay soo baxaan xagjiriin.
Waxay ka digtay khatar ka imaan karta dadka ka careysan howlaha dowladda.
Balse waxay intaas ku dartay inaan la ogeyn hadduu jiro qorshe gaar ah oo abaabulan.
Weerarkii US Capitol ayaa ku soo beegmay xilli Kongareeska ay kulan lahaayeen si ay u ansixiyaan guushii doorashada ee Joe Biden. Madaxweynihii markaas xilka ka sii degayay Donald Trump ayaa wax yar kahor taageerayaashiisa khudbad ugu jeediyay bannaanka Aqalka Cad wuxuuna ku cel celiyay sheegashooyin aan caddeymo loo heyn oo ah in doorashada lagu shubtay.
Wuxuu ku yiri: “Haddii aadan si adag u dagaallamin ma sii heysan doontaan dal.”
Kaddib koox ayaa u dhaqaaqday Capitol, iyagoo xoog ku galay dhismaha. Shan qof, oo uu ku jiray sarkaal booliiska Capitol ka tirsanaa, ayaa ku dhintay weerarka.
Mr Trump waxaa xil ka qaadis ka gudbiyay Aqalka Wakiillada sababo la xiriira inuu kicin sameeyay, waxaana lagu wadaa in dacwad ku soo oogiddiisa ay Aqalka Sare ka bilaabato bisha soo socota.
Talo bixinta shalay ayaa lagu sheegay in waaxda ay rumeysan tahay in khatar sare ay jiri karto toddobaadyada ka dambeeya caleema saarkii sida fiican u dhacay.
Waxaa intaas lagu daray in koox xagjiriin ah laga yaabo inay beegsadaan saraakiisha la doortay iyo xarumaha dowladda.
Waa digniintii ugu horreysay ee ay waaxdu soo saarto muddo sanad ah.
Weerarkii Capitol ayaa ka fajaciyay dalkaas iyadoo si degdeg ah loo soo qabtay dadkii ku lugta lahaa.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay aqoonsadeen ilaa 400 oo qof oo laga shakisan yahay isla markaana ay soo xireen 135 qof oo lala xiriirinayo weerarkaas.
Kooxdii weerartay Capitol oo laga maamuuso barta Telegram
Iyadoo ay dowladdu uga digeyso dadka Ameerikaanka ah inay ka feejignaadaan weerar ka imaan kara xagjiriin gudaha dalkaas ka soo baxa, haddana dad badan ayaa kooxdii weerartay US Capitol u aqoonsan inay yihiin “waddaniyiin” ay tahay in la maamuuso.
Barta baraha bulshada ee Telegram, oo kooxo badan oo garabka midig ah ay u wareegeen tan iyo intii laga mamnuucay Twitter iyo Facebook, kooxdii weerartay Capitol ayaa looga aqoonsaday dagaal yahannada xornimada iyo geesiyaal.
Kooxahaas ayaa ka hadla arrimo xagjirnimo ay ka muuqato, lamana kala garanayo in qoraallada qaar ay soo dhigaan shakhsiyaad ama mashiinno.
Qoraallo badan ayaa waxaa soo dhiga dadka sida dhabta ah u aaminsan Donald Trump kuwaas oo qaba inay tahay inuu weli sii noqdo madaxweynaha Mareykanka.
Previous articleJubbland iyo Puntland oo Bayaan wada jir ah soo saaray
Next articleMareykanka oo ku baaqay in Ciidamada Eretria isaga baxaan Dhulka Itoobiya
Ciidamada Kumaandoska Danab oo howlgal ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ayaa sheeegay inay Nolol KU qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada...
Wasiirka Arinaha Dibadda oi war ka soo saaray dagaalkii Balad Xaawo
Ciidamada Galmudug oo Rasaas la shacay Waalidiin Caruurtooda kaga maqnayeen Dalka...
Guddoomiyaha Guddiga Midnimada Africa oo sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisadda...